အခြားသူများ - Absolut Viajes | Absolut ခရီးသွားခြင်း (စာမျက်နှာ ၂)
တိုက်ကြီးငါးတိုက်ကိုသာသွားနိုင်သည့်နေရာများရှိသည်။ ဗီယက်နမ်၊ ပီရူး၊ နယူးဇီလန်၊ ကနေဒါသို့မဟုတ်ကင်ညာစသည့်နေရာများကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။
မော်လ်ဒိုက်တွင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုသင်တွေးမိလျှင်၎င်းတွင်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသော gastronomy ရှိသော်လည်းအထင်ကြီးလောက်သောသဘာဝအလှအပများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြလိမ့်မည်။
Lapland တွင်မည်သည့်အရာကိုတွေ့မြင်ရမည်ကိုသင်တွေးမိပါက၊ သင်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမြောက်ပိုင်းအလင်းများရှိသည်ဟုသင်ပြောလိမ့်မည်။
အဲဒီပျားရည်ဆမ်းခရီးခရီးစဉ်ကိုစဉ်းစားနေပါသလား။ ကောင်းပြီအခုမင်းတို့လည်းမင်းတို့စုစည်းနိုင်တယ်။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုမည်ကဲ့သို့နှင့်အားလုံးပြောပြပါမည်။
အကောက်ခွန်နှင့် Masais ၏အစဉ်အလာ
သင် Masais ၏ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်အစဉ်အလာအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပိုမိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်လိုပါသလား? သူတို့နေထိုင်ပုံကိုပြောပြသည့်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်။
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှ Bruges တွင်အံ့ဖွယ်ကောင်းသောသမိုင်းဝင်စင်တာတစ်ခုရှိပြီးကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်ထူးခြားသောအဆောက်အ ဦး များရှိသည်။
ဟယ်လ်စင်ကီသည်သမိုင်း၊ အထိမ်းအမှတ်များနှင့်ပြတိုက်များပြည့်နှက်နေသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်သင်မျှော်လင့်ထားတာထက်အရသာရှိတဲ့ gastronomy လည်းရှိတာပေါ့။
ကရာကော့သည်ဥရောပရှိအလှဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ကြွယ်ဝသောheritageရာမအမွေအနှစ်၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော gastronomy နှင့်ကြိုဆိုသောလူများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
အဆိုပါမြင်ကွင်းတွင် coronavirus ရောက်ရှိခြင်းသည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်တစ်ခုလုံးကိုဇောက်ထိုးလှန်ပစ်လိုက်သည်။ အချို့သောနိုင်ငံများသည်လွန်သွားပြီ၊
သွင်ပြင်လက္ခဏာအားလုံးကိုသင်သိပါသလား။ ကလေးများနှင့်အတူသွားရန်ဟိုတယ်များတွင်အဘယ်တူညီချက်ရှိသလဲ။ ဤတွင်အကောင်းဆုံးမိသားစုအားလပ်ရက်များဖြုန်းရန်သင့်အားပြသပါသည်
သင်သိသင့်သည့်ကလေးများမရှိသည့်ဟိုတယ်များ၏ထူးခြားချက်များစွာရှိသည်။ သင်ဟာစုံတွဲတစ်တွဲအနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ဦး တည်ရာတစ်ခုတည်းကိုနှစ်သက်ချင်ပါသလား။
Yellow Pages နှင့်အတူစားသောက်ဆိုင်ကိုရှာပါ
အဝါရောင်စာမျက်နှာများသည်သွားဆရာ ၀ န်များမှ professionals ည့်ဝတ်ကျေပွန်ခြင်းနှင့်မည်သည့်အမျိုးအစားကိုမဆိုကျွမ်းကျင်သူများရှာဖွေခြင်းအတွက်ပြည်နယ်၏ရည်ညွှန်းချက်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် caravan တစ်လုံးငှားချင်တယ်ဆိုရင်၊ အရာအားလုံးချောချောမွေ့မွေ့သွားနိုင်ဖို့နှင့်သင်၏အားလပ်ရက်များကိုပျော်မွေ့နိုင်ရန်အတွက်သင်ဟာအခြေခံအဆင့်များစွာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်။
သင်၏ခရီးစဉ်တွင်အသက်ဆက်ရှင်ရန် - သင်မလွတ်နိုင်သည့်အရာ
ခရီးသွားချင်ပါသလား။ ခရီးဆောင်သေတ္တာဘယ်မှာစရမလဲမသိဘူးလား။ သင်၏ခရီးစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးကိရိယာကိုကြည့်ပြီးအိမ်တွင်မည်သည့်အရာကိုမဆိုထားခဲ့ပါ။
တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်နှင့်နာမခံသောအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ Komodo အမျိုးသားဥယျာဉ်သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအိမ်မြှောင်၏တည်ရှိမှုကြောင့်ကျော်ကြားသောပရဒိသုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကလေးများနှင့်လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးသွားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်ထက် ပို၍ ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်းလက်တွေ့အကြံဥာဏ်များကိုအမြဲလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်တယ်။
အိပ်ရာ surfing ကဘာလဲ
Couchsurfing သည်ခရီးသွားလာခြင်းအတွက်အမြတ်အများဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဘယ်အရာဖြစ်ကြောင်းနှင့်၎င်းသည်၎င်း၏ကြီးမားသောအားသာချက်များအပြင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုရှာဖွေပါ။
မိသားစုအားလပ်ရက်ကိုစီစဉ်ခြင်းသည်မလွယ်ကူပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရန်အဆင့်များစွာကိုတင်ပြသည်။ ရိုးရှင်းပြီးလက်တွေ့ကျသည်။
Lake Bled: ဆလိုဗေးနီးယားသို့လာရောက်လည်ပတ်ခြင်း
အကယ်၍ သင်သည်ဆလိုဗေးနီးယားရှိ Bled Lake သို့သွားလျှင်အကောင်းဆုံးဥရောပနတ်သမီးပုံပြင်နှင့်ထိုက်တန်သည့်မှော်နှင့်သဘာဝကမ္ဘာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်ကောင်းသောအံ့ဖွယ်အမှုများတွင်မိမိကိုယ်ကိုဆုံးရှုံးရန်ကြိုးစားနေပါက Victoria Falls သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကောင်းဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဖြစ်လာသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားရှိ Angkor ဘုရားကျောင်းများသို့လည်ပတ်ခြင်း
ကမ္ဘောဒီးယားရှိ Angkor ဘုရားကျောင်းများသို့လည်ပတ်ခြင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရေးကြီးဆုံးumentရာမအဆောက်အအုံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုရှာဖွေပါ!
ကြိုတင်၍ ခရီးစဉ်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ခြင်း၏အားသာချက်များမှာသင်သိသင့်သည်။ ဒီနည်းနဲ့မင်းရဲ့အားလပ်ရက်မှာဘယ်လောက်ပျော်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်။
အဘယ်အရာကို Belegg, ဘယ်လ်ဂျီယံတွင်ကြည့်ရှုခြင်း
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် 'မော့စ်၏သမီး' ဟုခေါ်သောသို့မဟုတ် Dinant ဟုလူသိများသောလမ်းလျှောက်ခြင်းကိုခံယူကြသည်။ Dinant, ဘယ်လ်ဂျီယံနှင့်၎င်း၏လှပသောထောင့်ရှိအဘယ်အရာကိုမြင်တွေ့ပါ။
ကွာလာလမ်ပူ Petronas မျှော်စင်များ - မလေးရှားအမြင့်များမှဖြစ်သည်
ကွာလာလမ်ပူရှိ Petronas မျှော်စင်များသည်မလေးရှား၏အထင်ကရသင်္ကေတများထဲမှသာမကယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကထောက်ပံ့သောအာရှအောင်ပွဲဖြစ်သည်။
spa အစီအစဉ်မှသည်ချစ်စရာကောင်းသောမြို့များတွင်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ရန်စုံတွဲတစ်တွဲအနေဖြင့်တနင်္ဂနွေအတွက်အစီအစဉ်များသည်သင့်ကိုအောင်မြင်လိမ့်မည်။ သူတို့ကိုသင်ပြီးပြီလား
အောက်တိုဘာလတွင်မည်သည့်နေရာသို့သွားရမည်ကိုရှာဖွေပါ။ ကောင်းမွန်သောအပူချိန်နှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အရာများစွာနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသောနေရာများ။ နှစ်ကြိမ်မစဉ်းစားပါနှင့်!
မဲခေါင်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် - မြစ်အောက်ပိုင်းဗီယက်နမ်၏အပူပိုင်းမှတဆင့်
မဲခေါင်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင်အုန်းပင်များ၊ ကျယ်ပြန့်သောစပါးစိုက်ခင်းများသို့မဟုတ်ရေပေါ်ရွာများသည်ဗီယက်နမ်၏မှော်အတတ်နှင့်ထူးခြားဆန်းကြယ်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မင်းသိချင်လား
ဘယ်ကို ဦး တည်ချက်မပါဘဲပျံသန်း, သူတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ
အကယ်၍ သင်သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမောင်းနှင်မှုလိုင်စင်ကိုမည်သို့ရယူရမည်ကိုစဉ်းစားနေပါကသင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အဆင့်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ၄ င်းတို့၏စျေးနှုန်းကိုသင့်အားပြသပါမည်။
Game of Thrones ရှိအရေးအကြီးဆုံးနေရာအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်စစ်ဆေးသည်။ ကျနော်တို့စီးရီးတစ်လျှောက်လုံးမြင်ကြပြီထူးခြားသောနေရာများ။
သင်၏ပတ်စ်ပို့သက်တမ်းတိုးရန်သင်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကိုရှာဖွေပါ။ ၎င်းကိုမည်သည့်နေရာမှလုပ်ရမည်၊ တင်ပြရန်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ပေးချေရန်စျေးနှုန်း။
Bran Castle သို့မဟုတ် Dracula's Castle သည်ရိုမေးနီးယားရှိမဖြစ်မနေမှတ်တိုင်များတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျက်သရေနှင့်ဒဏ္legာရီတွေအများကြီးပါတဲ့နေရာ။
မြောက်ပိုင်း Lights ကိုဘယ်မှာကြည့်မလဲ
မြောက်ပိုင်း Lights ကိုဘယ်မှာကြည့်မလဲသိချင်ရင်ဒီလှပတဲ့သဘာဝဖြစ်စဉ်ကိုသင်ခံစားနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအချက်များဖြင့်သင့်ကိုထားခဲ့ပါ။
အယုဒ္ဒယဘုရားကျောင်းများသည်ရှေးခေတ်ပန်းခြံ၊ နန်းတော်များနှင့်အခြားခေတ်များနှင့်ဆက်စပ်သည့်ပန်းပုရုပ်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသောသမိုင်းဝင်ပန်းခြံတွင်ပျော်မွေ့ရန်ထိုခရီးစဉ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ထိုင်းနိုင်ငံသို့သွားရောက်ရန်စီစဉ်ထားပါက၊ ဤနေရာကိုမမေ့နိုင်ပါ။
နိုင်ငံခြားသို့သွားလျှင် - သင်လည်ပတ်သည့်တိုင်းပြည်မှ Roaming သို့မဟုတ်ဆင်းမ်ကဒ်များကိုကြိုတင်ပေးချေထားပါသလား။
ဤမေးခွန်းသည်သံသယများစွာဖြစ်စေနိုင်သောမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ Roaming (သို့) ကြိုတင်ငွေဖြည့် SIM ကဒ်နှစ်ခုစလုံးသည်ခရီးစဉ်နှင့်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်သောအခါရွေးချယ်စရာနှစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ယနေ့စျေးအသက်သာဆုံးနှင့်သင်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်အဆိုးဆုံးကိုယနေ့ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
ခရီးစဉ်တွင်သင်၏မိုဘိုင်းလိုအပ်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါသည်။ သင်မလိုအပ်သောအရာအားလုံးကိုသယ်ဆောင်ရန်နည်းတစ်နည်းဖြစ်ပြီး၊ ထိုထိုက်သင့်သောအနားယူခြင်းနေ့ကိုကျွန်ုပ်တို့ပျော်မွေ့နိုင်သည်။ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အရာကိုရှာဖွေပါ။
သင်၏နောက်တစ်ခုမှာဖီဂျီကျွန်းများဖြစ်ပါကထိုခရီးစဉ်ကိုမမေ့နိုင်သောအရာထက်ပိုပြီးပြုလုပ်ရန်သင်လိုအပ်သောအချက်အလက်အားလုံးကိုသင့်အားပေးလိမ့်မည်။ ဤကျွန်းများတွင်ဘာလုပ်ရမည်၊ စျေးနှုန်းနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အလွန်လိုအပ်သည်။ ငါတို့ထုပ်ပိုးနေပြီလား
Tanna သည်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ဗနူတူကျွန်းစုဖြစ်သည့်ကျွန်းများစွာထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်သံသယမရှိဘဲသူမရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အလွန်ကြီးစွာသော quirks ရှိပါတယ်။ ထိုအချိန်က Jules Verne ကကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြခဲ့သည့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောကျွန်းတစ်ကျွန်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ သင်အဲဒါကိုဝင်ချင်ပါသလား
ကျနော်တို့ကရှည်လျားသောလိုင်းများကိုမစောင့်ချင်တဲ့အခါ, လက်အိတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးမဟာမိတ်ဖြစ်လာသည်။ ဒါပေမယ့်ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့ဘာသယ်ဆောင်နိုင်သလဲ၊ ဒီတော့ဒီနေ့ဒီနေ့မင်းခေါင်းထဲမှာရှိနေတဲ့သံသယတွေအားလုံးကိုရှင်းပစ်လိုက်ပြီ။
သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်အလှတရားများစွာတို့ဝန်းရံထားသောထူးခြားလှပသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သောကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးကမ်းခြေအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသမည်။ ငါတို့ပြောခဲ့တဲ့အရာတွေထဲမှာမင်းရှိဖူးလား။ သူတို့သည်တစ်သက်တာတွင်ပျော်မွေ့ထိုက်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောမြင်ကွင်းပေါ်ရှိလူသိအများဆုံးသဲကန္တာရတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းသွားကြသည်။ Wadi Rum သည် Lawrence of Arabia ကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်ကားများ၏ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီးတစ်သက်တာတွင်တစ်သက်တာနေထိုင်ရန်ထိုက်တန်သောနက်နဲသောအရာများနှင့်သိချင်စိတ်များကိုဖုံးကွယ်ထားသည်။
စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းသို့မည်သို့အခမဲ့ခရီးသွားနိုင်ကြောင်းရှာဖွေပါ။ သင်နှင့်သင်၏အနာဂတ်အတွက်အလွန်ကြွယ်ဝသောအတွေ့အကြုံ။
Leuven ကိုရှာဖွေပါ။ ရိုးရာ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဘဝများစွာပေါင်းစပ်ထားခြင်း။ ထွက်ပြေးခြင်းတွင်သင်မြင်နိုင်သောလှပမှုနှင့်ပြည့်စုံသည့် Nooks နှင့်အထိမ်းအမှတ်ပစ္စည်းများ။
မြေအောက်ဆားဘုရားရှိခိုးကျောင်းအဖြစ်လူသိများသည့်ဆားမိုင်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။ သူတို့ကပိုလန် Wieliczka မြို့၌တည်ရှိသည်။
အဘယ်အရာကို Bratislava တွင်ကြည့်ရှုရန်
Bratislava တွင်ဘာကိုတွေ့မြင်ရမည်ကိုလက်လွတ်မသွားပါနှင့်။ ဆလိုဗက်ကီးယား၏မြို့တော်သည်အနုပညာသည်ဒဏ္meetsာရီနှင့်သမိုင်းနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုပြရန်ထောင့်များစွာရှိသည်။
ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းခရီးစဉ်ကိုမည်သို့စီစဉ်ရမည်ကိုသင်သိလိုပါကယနေ့သင့်အားထားခဲ့သည့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအတွက်အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်။
မော်လ်တာတွင်ဘာကိုတွေ့ရမည်ကိုလက်လွတ်မသွားပါနှင့်။ ၎င်း၏အဓိကကျွန်းများနှင့်ကြီးမားသောဗိသုကာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဘဏ္treာနှင့်ပြည့်ဝသော၎င်း၏မြို့ကြီးများတစ် ဦး ခရီးစဉ်
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ Backpacker ၏လမ်းညွှန်
အကယ်၍ သင်သည်ထိုင်းနိုင်ငံသို့အပန်းဖြေခရီးသွားတစ် ဦး အနေဖြင့်ခရီးသွားလျှင်သင်ဘာကိုသယ်ဆောင်ရမည်၊ မည်ကဲ့သို့သွားရမည်၊ ငွေကြေးလဲလှယ်ခြင်းနှင့်အခြားလှည့်ကွက်များကိုသင်ပေးသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုမလွတ်ပါစေနှင့်။
ကိတ်ဗာဒီရှိ Sal ကျွန်း၊ No Stress ယဉ်ကျေးမှု
ကိပ် Verde ရှိ Sal ကျွန်းသည်ပရဒိသုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအာဖရိကတိုက်ရှိအလှဆုံးကမ်းခြေတစ်ခုမှနွေးထွေး။ itable ည့်ဝတ်ကျေပွန်သူများနေထိုင်ကြသည့်ပရဒိသုတစ်ခုဖြစ်သည်။